Ogaden News Agency (ONA) – Faraca Barsan Ee Gaarissa oo Kulan Muhiim Ah Yeeshay
Faraca Barsan Ee Gaarissa oo Kulan Muhiim Ah Yeeshay
Maanta oo Jimce ahayd taariikhduna ay kubeegnayd 30/9/16 Waxaa magaalada Gaarissa ee xarunta Gobolka Woqooyi Bari Kenya ka dhacay shir aad ubalaadhan oo ay siwada jir ah u soo agaasimeen Faraca Barsan Iyo Ururka OYSU Fariciisa Gaarissa.
Ugu horaynba gudoomiyaha faraca Barsan mudane Sheekh Maxamad Cismaan ayaa furay kulankan oo ay kasoo qayb galeen xubno aad utiro badan wuxuuna furmay abaare 2:00 duhurnimo xiliga bariga Africa waxaana lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah.
Intaas kadib waxaa laguda galay qaybtii hore ee shirka oo ay hogaaminayeen gudiga Faraca Barsan waxayna gudigu madasha ka akhriyeen wareegto ay soo saartay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia taas oo xubnaha jabhada lagu siinayay waajibaad ku aadan howlaha halganka.
Sidoo kale gudiga faraca ayaa bixiyay shahaado sharaf ay siiyeen xubno mutaystay oo shaqo wanaag lagu xushay waxayna dadwaynuhu xubnahaas kusoo dhaweeyeen sacab iyo sawaxan.
Intaas kadib waxaa hogaaminta shirka lawareegay gudiga OYSU waxaana khudbad aad u qiimo iyo qaayo badnayd madasha kasoo jeediyay xoghayaha OYSU Gaarissa halgame Yuusuf Maxamad Axmad wuxuuna Xoghayuhu akhriyay ajandaha ay shirka ugu tala galeen oo ay kamid ahaayeen waxqabadkii ururka OYSU, Taariikhda Ururka iyo waliba qodobo kale.
Xubnihii shirka kahadlay waxaa kamid ahaa marwo Nimco Cabdi Axmad iyo Hooyo Faadumo oo guubaabo kasoo jeediyay madasha iyo waliba xubno kale oo khudbado taariikhi ah soo jeediyay
intaas kadib waxaa loo kala dhexbaxay koox faneeda Heegan iyo xubnihii faraca Barsan waxayna kooxdu soo bandhigtay sugaan halgameed dhiiga dadwaynaha dhaqaajiyay.
Guntii iyo gabagabadii wuxuu kulanku kusoo dhamaaday jawi farxad leh xili salaada makhri ka hor ah waxayna xubnuhu ukala dheel madeen xaafadahoodii iyagoo faraxsan.